Hal Todobaad oo kudhawaad 100 Howlgal ka dheceen 8 Dal.(Akhriso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Hal Todobaad oo kudhawaad 100 Howlgal ka dheceen 8 Dal.(Akhriso)
On Sep 10, 2020 473 0
Todobaadkan gudihiis, Jamaacaadka ka howlgala saaxaatka Jihaadiga ah ayaa fuliyay kudhawaad 100 howlgal oo kala duwan, kuwaas oo beegsaday ciidamada Shisheeyaha ee duulaannada ku jooga wadamada caalamka Islaamka iyo kuwa ku wehlinaya duulaannadaas.
Ugu yaraan 8 saaxadood oo jihaadi ah oo ay kamid yihiin bariga Africa, Khuraasaan, Qaarad u ekaha Hindiya, Galbeedka Africa, Shaam, Jaziiratul Carab, Balooshistaan iyo bartamaha Africa, ayaa fuliyay howlgalladan oo tiradoodu gaareyso 98 howlgal.
Bariga Africa ayaa ku jirta kaalinta koowaad, waxaana todobaadkan ay fuliyeeen ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ugu yaraan 65 howlgal, waxaana kaalinta labaad ku jira Khuraasaan, oo ay Mujaahidiinta Imaarada islaamiga ah fuliyeen 22 howlgal, halka Qaarad u ekaha Hinidya iyo Jaziiratul Carabna ay ay fuliyeen min 4 howlgal, galbeedka Africana waxay geysteen 3 howlgal, iyadoo Mujaahidiinta Shaam iyo Balooshistaan ay fuliyeen min hal howlgal.
Isu geynta khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashey howlgalladan ka dhacay 8 saaxadood oo Jihaadi ah waxay gaarayaan inkadan lix boqol oo ruux oo isuga jira Shisheeyaha iyo ciidamada wehlinaya, waxaana dhimashadu ay gaareysaa 357 askari, halka dhaawacuna yahay 259 askar iyo saraakiil isuga jira.
Mid kamid ah camaliyaadka ugu muuqday ee ay Mujaahidiintu fuliyeen todobaadkan, waa weerarkii Nafhurnimada ahaa ee deegaanka Jannaay Cabdalla lagula beegsaday ciidamo ka kooban Maraykan iyo Bankraf oo waday dhaq-dhaqaqyo qarbudaad ah.
War kasoo baxay taliska milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu xaqiijiyay in camaliyada Istish-haadiga ah lagu dilay askar isuga jira Maraykan iyo kuwa Bankrafta, sidoo kalena lagu burburiyay gawaari dagaal.
“Maalintii Isniinta, 19ka Muxarram 1442H, kuna beegan 07 Sebtember 2020, Ciidamada Xarrakat Ash-Shabaab Al-Mujaahidiin waxay si guul ah u fuliyeen Camaliyad istish-haadi oo lala beegsaday kolonyo ka tirsan saliibiyiinta Mareykanka iyo maleeshiyaatka murtadiinta, iyagoo halkaas ku dilay afar ka mid ah Ciidamada Mareykanka, kuwo kalena dhaawacay. Sidoo kale waxay Mujaahidiintu weerarkaas ku dileen in kabadan 16 murtadiin ah, 12 kalena way ku dhaawaceen” ayaa lagu yiri war saxaafadeed ku qornaa luuqadda Englishka oo kasoo baxay taliska milliteriga ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Weerarkii kan xigay ee ugu weynaa howlgallada dhacay todobaadkan, wuxuu ahaa camaliyad Nafhurnimo oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacday afaafka hore ee xarunta madaxtooyada magaalada Muqdisho.
Naftii hure kaxenyay gaari miineysan ayaa beegsaday albaabka hore ee madaxtooyada, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo iyo saraakiil katirsan ilaalada madaxtooyada, waxaana wararkii ugu dambeeyay ee la helay ay xaqiijinayaan dhimashada 6 ruux oo isuga jira saraakiil iyo askar, halka dhaawacu ka badanyahay 10 askari.
Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ee dalka Yemen ayaa iyagana waxay todobaadkan geysteen ugu yaraan afar howlgal, oo ay ku beegsadeen malleeshiyaadka Xuuthiyiinta iyo kuwa hoostaga dowladda Imaaraatka Carabta.
Kamiin ka dhacay bartamaha wadanka Yemen, gaar ahaan gobolka Al-Beydaa ayay Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca waxay ku dileen 5 askari oo katirsan malleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Rag hubeysan oo katirsan Mujaahidiintana waxay deegaan katirsan gobolka Shabwah ku toogteen askari katirsanaa malleeshiyaadka ka amar qaata dowladda imaaraatka Carabta.
Gobolka Abyan ee Yemen, ayaa isagna qeyb ka aha meelaha ay todobaadkan ka dheceen howlgallada Jihaadiga ah, waxaana qaraxyo lala eegtay kolonyo uu la socday sarkaal katirsan Xizaamul amniga hoostaga Imaaraatka Carabta oo lagu magacaabo Sadaam As-Saalixi.
Dalka Maali oo isna dhaca galbeedka qaaradda Africa ayaa howlgallada ugu muuqday ee ka dhacay todobaadkan waxaa kamid ahaa qarax lala eegtay kolonyo ciidamo Faransiis ah oo ku socdaalayay gobolka Kidaal ee wuqooyiga dalka Maali.
Ugu yaraan labo askari oo katirsan ciidamada Faransiiska ayaa ku naf waayay qaraxa, halka mid sadexaadna uu dhaawac daran uu soo gaaray, halka gaarigii ay saaarnaayeen uu gebi ahaanba burburay.
Dowladda Faransiisk ayaa qirtay khasaaraha kasoo gaaray howlgalkan, oo si gaar ah kaga hadlay madaxweynaha dalkaas Emmanual Macron, oo dhawaan xurriyad ku tilmaamay Aflgaadeynta Rasuulka Salla-llaahu caleyhi wasallam.
Saaxaatka Jihaadka ee Caalamka Islaamka ayaa waxaa ka muuqanaya dardar horleh iyo dadaallo ballaaran oo lagu sii kordhinayo halganka Jihaadiga ah ee wadamadaas ka soconaya, laguna doonayo in lagu xreeyo wadamada muslimiinta, maamul islaami ahna looga tago.
Waxay kusoo aadeysaa dardartan Jihaadiga ah, iyadoo dowladda Maraykanka maalmo kadib ay u baroor diiqi doonto kumanaankii ruux ee looga dilay howlgalladii waaweynaa ee 11 septembar, oo 19 sano kahor ay gudaha dalka Maraykanka ka fuliyeen 19 mujaahid oo ku abtirsada Umadda Nabi Muxammad Salla-llaahu caleyhi wasallam, kana tirsanaa Mujaahidiinta Al-Qaacida.